I-JOSM -I-CAD yokuhlela idatha kwi-OpenStreetMap -Geofumadas
NgoJulayi, 2015 Iiphotography, Ukuprinta kokuqala
I-OpenStreetMap (i-OSM) mhlawumbi yenye yemizekelo ebalaseleyo yendlela ulwazi olunikezwe ngendlela yokusebenzisana lunokwakha ngayo imodeli entsha yolwazi lweemaphu. Ngokufana neWikipedia, eli phulo liye labaluleka kakhulu kangangokuba namhlanje kubaphenduli beendawo zomhlaba kubhetele ukubeka lo maleko ngasemva endaweni yokuba nexhala lokuhlaziya ulwazi lwakho kwizinto ezinje ngamanqaku anomdla, amashishini okanye idatha engekhe ikwazi ukuqhubeka ihlaziywa.
Ukusebenzisa iprojekthi OSM Cadastral ungaya ngayo ishishini lakho, iziza, kwaye okukhethekile cartography wengingqi, sivumele ireferensi data agqitywe abantu, ukuba kunokwenzeka kukhuthaza intsebenziswano, wazi ukuba kwanokuba oko asiyihlaziyanga indawo yabo, ngenye imini wena, kuba ayibuyiseki umva.
Kukho iindlela ezininzi zokuhlaziya ulwazi OpenStreetMap. Kuxhomekeke kwinto ezakusebenza, ukhetho lokuyenza kwi-Intanethi okanye kwiselfowuni kulula kumanqaku esitalato enziwa ngokutolikwa kweefoto. Kodwa ukuba sinethemba lokwenza i-topologies eqinileyo, kunye neemephu kwi-DXF, iifomathi ze-GPX okanye ukuba singabathandi be-CAD, isisombululo esinomdla yiJOSM, isixhobo somthengi esenziwe kwiJava.
Lo ngumzekelo, apho umaleko we-OSM uphelelwe ngumhla. Ndiyayibona kuba umfanekiso kaGoogle mvanje kunokuba i-OSM inokubonisa, ihlala i-Bing, ethi kumazwe amaninzi asakhulayo ihlwempuzeke.
Imephu ibonisa ukuba loo ndawo yayifana neminyaka emibini edlulileyo.
Umfanekiso ubonisa indlela okwakunjani emva kokugqitywa kwexesha elidlulileyo kunyaka ophelileyo.
Inkqubo yeJOSM kulula ukuyisebenzisa nakubani na osebenzise inkqubo efana ne-AutoCAD okanye iMicrostation. Kuba yakhiwe kwiJava liqonga elinqamlezileyo kwaye emva kokuba ikhutshiwe ikulungele ukusebenza. Njengoko ubona, kulo mfanekiso usuka kwi-Bing kukuba umntu wakhe wahlaziya iimephu.
Ukucindezela inkinobho yokukhuphela, inkqubo iyanciphisa indawo yomdla kwifomathi yefayile, ukuhlela, ukususa okanye ukongeza.
Kule meko, ndifuna ukuphucula ibhulorho engalinganiyo. Iphaneli esecaleni ikuvumela ukuba ukhethe ukuba zeziphi izendlalelo ofuna ukuzibonisa, kunye nomda wokuba Imifanekiso engemvelaphi kuGoogle ayinakulayishwa ngenxa yemigaqo-nkqubo ye-OSM ukunqanda ungquzulwano lwamalungelo, kodwa kwanokuba ukufuduswa kwemifanekiso kungadala ungquzulwano ekunzima ukulugcina. .
Olunye ukhetho kukuqhuba ngaphezulu kwebhulorho, kunye ne-gps ephathekayo esebenzayo kwaye ukhuphele idatha. I-JOSM ixhasa ukuvulwa kwedatha yomfanekiso, i-DXF, iifomathi zeGPS ezinje nge-GPX, i-NMEA, kunye nokulayisha inkonzo yeWMS, phakathi kwabanye.
Ukuhlela okanye ukuhlaziya kufuneka ube nomsebenzisi, okwenza imizuzu embalwa kwiphepha le-OpenStreetMap.
Iphaneli yecala ibonisa iziqendu imvelaphi ekhoyo, vula, vala.
Ukukhetha ezo silindele ukuzibona kule ipaneli, khetha imifanekiso kwimenyu ephezulu- kwaye nantsi ii-Bing, Imephu yesatellite, iMephuquest Open Aerial, eyeendlela ze-wms okanye nemifanekiso edweliswe ngokusebenza kwale nkqubo.
Unokukhetha kwakhona isitalelo esithemba kuzo ukubona izinto zeempawu.
Kwinqanaba lokusebenza, kuya kufuneka ufunde amaqhosha ebhodibhodi okanye ukuskrola imouse kuba amaqhosha okusondeza alinganiselwe. Uphawu + nguSondeza, uphawu-lusondeza ngaphandle, njengoko bendifuna njalo, andilifumananga iqhosha lokuskrola (pan).
Xa uchukumisa izinto, ukhetho lweemeko luyasebenza, njengokutshintsha ukuqhelaniswa kwendlela, ukuqhubela phambili okanye ukongeza ii-nodes.
Kufuneka udlale ngemenyu ukuze ubone imisebenzi esebenzayo, kwaye ubone uluhlu lweefowuni ukukhetha into enokuba nomdla wokukhuphela.
Ukuhlela imigca etshintsha imilo, kuye kwafuneka ndihambise iinowuthsi kuphela, kwaye ukuchukumisa embindini wecandelo kudala iindawo ezintsha ngaphandle kwengxaki enkulu. Ukuhlela indawo apho imigca emibini idibana khona, ndiyichukumisile i-vertex kunye nokukhetha ukunqamla, nangona bendikhetha ukwenza indawo yangaphambili, ndinqumle kwaye ndicime icandelo eligqithisileyo. Ke izinto kufuneka zinikezelwe ukuba ziyintoni na, ukuba ziindlela eziphambili, izihlanganisi zendlela yebhulorho kwaye zibonise ukuba zinendlela enye okanye emibini.
Kwakhona wasebenzisa ukuhlela eminye imigca ezikufuphi eziye oversimplified yaye kongezelelwa eziliqela macandelo nangona zibonwa umfanekiso Google, ndiyazi ngenxa imiso yonke ndihamba apha xa ndisiya emsebenzini wam.
Ekugqibeleni, emva kwexesha lokudlala, umsebenzi we vector uhleli njalo.
Xa ufaka idatha, inkqubo iqinisekisa ukungangqinelani, ezinje ngeendawo ezingadibananga, kunye nenketho yokusondeza kwindawo yongquzulwano. Kwenzeka kancinci kakhulu kuba i-snap iyasebenza kwaye iyasebenza. Ikwaqinisekisa ukwenziwa kwezinto eziphezulu zodidi olufanayo kunye nonxibelelwano olungaqhelekanga phakathi kwezikhombisi zomkhondo. Eminye imiba eqinisekisa ukungqubana nenye idatha umntu anokuyilayisha kwindawo enye.
Xa ulayishiwe, ungabona utshintsho ngokukhawuleza kwi-OSM.
Sibiza lo mdwebo we-cartography.
Ndicetyisa ukuba ndijonge kwi-a Ukunikezelwa okwenziwa nguJorge Sanz, kunye neenkcukacha, iinkcukacha kunye nempumelelo ye-OpenStreetMap esinceda siqonde ukuba sihlala phi ivule ingqondo yethu kwisimo sabantu abaninzi.
Thelekisa i-OpenStreetMap nezinye iimephu zewebhu
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuma komhlaba ngokwesiko vrs. LiDAR. Ukuchaneka, ixesha kunye neendleko.
Post Next Ngenisa i-OpenStreetMap idatha kwi-QGISOkulandelayo »